The Irrawaddy's Blog: နေပြည်တော်ရောက် ဧည့်သည်
၈၈ မျိုးဆက် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကုိုကုိုကြီးနဲ့ ဇနီး ခင်သူသူဝင်းတို့ ဒီကနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
- ဓာတ်ပုံများ - ဂျေပုိုင် / ဧရာဝတီ -
ရန်ကုန်မှာ ပြုလုပ်မယ့် သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ တက်ရောက်ဖို့ နေပြည်တော်က နိုင်ငံရေးသမား အများအပြားကို သွားရောက် ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်မင်္ဂလာဆောင်က သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ဧပြီ ၆ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ပြုလုပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မခင်သူသူဝင်းက စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့နယ်ကပါ။
လွန်ခဲ့သော သောကြာနေ့ (မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့) မနက်က ကလေးမြို့မှာ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတခု သူတို့ ကျင်းပခဲ့ပြီးပါပြီ။
မခင်သူသူဝင်းက (ဒေါက်တာသိန်းဝင်း)၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့် (ရတနာပုံ ထီဆိုင်)တို့ရဲ့ သမီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
I wish my best greeting for the married couple. May you get the peaceful and joyful ever-lasting married life.
It is good opportunity to invite the politicians from all scopes of life. The trust building and confidence construction start with very humanly gathering, stress free. The social gathering with wide variety of topics and discussion but no office work/ no politics during this gathering. It is relaxed social environment where friendship of personal level can be found out between the political adversaries. This is the time we can see ourselves as the friends.
တော်တော် တရားရစရာကောင်းတယ် ၊ သူတို.ကြတော.ပျော်ရွှင်နေလိုက်ကြတာ ၊ သာမန်ပြည်သူလူထုကိုတော. အသုံးချလမ်းပေါ်ထွက်ခိုင်းပြီး ၊ နေပူပူမှာ ဆန္ဒပြ ပါဆိုပြီး ၊ မြှောက်ပင်.ပေးနေတယ် ။ မင်းတို.ကောင်တွေ ကိုယ်.စေတနာကိုယ်အကျိုးပေးမဲ.ကောင်တွေ ။ မင်းတို. အာဏာရ နံမည်ကြီးအောင် ဘာမှနားမလည်တဲ.ပြည်သူတွေကို အသုံးချနေတာတွေ ဘယ်တော.မှ အဆုံးသတ်မှာလည်း ?